The Irrawaddy's Blog: အလကားရတာ မသုံးနဲ့၊ ငါတို့ဟာကို ပိုက်ဆံပေးသုံး တဲ့
အလကားရတာ မသုံးနဲ့၊ ငါတို့ဟာကို ပိုက်ဆံပေးသုံး တဲ့
Posted in: Announcement , Data , အချက်အလက် , ကြေညာချက်
March 15, 2011 at 5:35 PM
အလို .. ဘုရားဘုရား .. ဘယ်လိုအစိုးရပါလိမ့် .. နိုင်ငံတော် ဝင်ငွေ ထိခိုက်လို့ ပိတ်တယ်တဲ့လား .. ဘုရားဘုရား .. လောဘ.. လောဘ .. ဒေါသ ..
March 15, 2011 at 7:13 PM
ဒါဟာ အဓိပ္ပာယ် မရှိတဲ့ အခြေခံ လူ့အခွင့်အရေး ခြိုးဖောက်မှုလို့ မြင်ပါတယ်။
ဘုရားစူးဈေးကွတ် စီးပွားရေး စနစ်ပါ
အတော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ အစိုး၇အမည်ခံတွေ။ အစိုးရ အမည်ခံ ဓါးပြတွေ ။ နည်းပညာ လွတ်လပ်မှု့ ၊ တိုးတက်မှု့ ကို မခံနိုင်တဲ့ စီးပွားရေး ဝိသမလောဘသားတွေ ။ ရာဇဝင် သမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင် ပေးကြပါ။ ဝန်းထမ်းအမည်ခံ အာဏာရူးတွေ ကို များများ သမိုင်းမှတ်တိုင် မော်ကွန်းထိုးပေးကြပါ။ ပြည်သူပြည်သားတွေ သက်သာမည့် နည်းလမ်း အခွင့်အလမ်းတွေဆိုရင် ပိတ်မယ်၊ ကာမယ် ဖျက်လို ဖျက်ဆီးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အားဏာရ အဖျက်သမားတွေပါ။
သူများတကာတွေက ရှေ့ကိုသွားဘို့ လုပ်နေတယ်။ သူတို့က နောက်ပြန်သွားနေတယ်။ ဒုက္ခ...
March 15, 2011 at 9:37 PM
အင်း .. ဒီလူတွေတစ်လျောက်လုံး လွဲလာလိုက်တာ ခုချိန်ထိကို အင်တာနက် အကြောင်း ကွဲကွဲပြားပြားသိပုံမရဘူး .. အင်တာနက်တော့ခွင့်ပြုတယ် voip ကတရားမ၀င်တဲ့ ...ကောင်းရောကွာ အီအီးတော့ပါပါ .. ရှူရှူးတော့ မထွက်စေနဲ့ လို့ခိုင်းသလိုဖြစ်နေပြီ ..ရှူးမပေါက်စေချင်ရင် အစောကြီးကတည်း က အီးမပါခိုင်းနဲ့ပေါ့ကွ
March 15, 2011 at 10:36 PM
နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ အဲဒီနိုင်ငံတော်ဝင်ငွေက ဘယ်လိုမျိုး ပြည်သူတွေကို အကျိုးပြုပေးနေတာတုံး ဖုန်းကိုဈေးကြီးကြီးနဲ့လည်းရောင်းသေး
March 15, 2011 at 10:37 PM
တိုးတိုးပြောပါ သူများတွေကြားသွားရင် ရှက်စရာကြီး ဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင် နောက်နှစ်ပေါင်း 20 လဲ တိုးတက်အုံးမှာ မဟုတ်ဖူး။ သူတို့မို့ မရှက်တတ်တာ။
တိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ မစဉ်းစားဘူး။ကိုယ်လဲမလုပ်နိုင်ဘဲနဲ့ စမာန်ခုတ်နေသေးတယ်။သောက်ရူးကောင်တွေ။သောက်ဆင့်ကိုမရှိဘူး။Gtalkသုံးဖို့ ဒင်းတို့ ဆီမှာpermitကျအောင်စောင့်ရမှာလား။ပိုက်ဆံရောသွင်းရမှာလား။နေလိုက်တော့နွားကောင်တွေ။
March 15, 2011 at 10:54 PM
how do they think? cheil brain twe par lar.I never hear the news like that. I think there is no country in this world, except myanmar.Oh my god
March 15, 2011 at 10:58 PM
March 15, 2011 at 11:31 PM
ပေါက်ကရတွေေ၇းပီး ပီးမှအဟက်ခံရတယ်လို. တော. မပြောနဲ.ဗျာ ဖတ်တဲ.လူတွေကိုတော.လေးစားစေချင်တယ်
သုံးတော့ဘာဖြစ်လဲ ဘာလုပ်ချင်လဲ ...အမှန်တကယ်ဆိုရင်ပြောတာပါ...
March 16, 2011 at 1:21 AM
ဟမ် .... အဲဒါပဲ ... ကောက်ရိုးပုံစောင့်တဲ့ခွေးဆိုတာ၊ သူများလားစားတော့လဲ ဟောင်တယ်၊ ကိုယ်တိုင်လဲ မစားဘူး ဆိုတာလိုပဲ၊ ဒါမှမဟုတ် မြင်းကမလှုပ် တိုင်ကလှုပ်တယ်ပဲ ပြောရမလား၊ စကိုက်ပီတို့ ဗီဇက်အိုတို့ ဂျီတော့တို့ကို တီထွင်ခဲ့တဲ့ သူတွေတောင် လူတွေကို ဘာမှမပြောတာ .... ဟင်း. ..... စိတ်ပျက်စရာဗျာ ... ဘယ်လိုနားလည်ရမှာလဲ .. ဘာကိုနားလည်ရမှာလဲ
March 16, 2011 at 3:20 AM
It's all beyond my words!!!
I have nothing to say!!!
March 16, 2011 at 4:47 AM
အင်တာနက်ကနေ speech ပေးနေတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ဒုတိယမြောက် ယက်တောရေကူး ကွက်သစ်ပေါ့ဗျာ...ခလေးကွက်တွေနဲ့ ကဒါရွေ ရဲ့... ဘယာပွေ အကွက်ဆန်းထင်ပါ့...
March 16, 2011 at 4:51 AM
သောက်ပေါအစိုးရပါလား။ နိုင်ငံတစ်ကာ ဘယ်အစိုးရကမှ မလုပ်တဲ့ ဇီးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကို ကျင့်သုံးနေတာ။
cw said... :
The genta always think that this is their right.
They know nothing outside their kingdom. Very childish.
I've been thinking something would definitely happen whenever I watched and listened Daw Su's speeches to organizations abroad. But honestly, I didn't think it would be that childish. Yes, asacomment stated, the junta aims at Daw Su. Will the users blame the junta or Daw Su? Their next step would be face-book, twitter, and so on. Who knows they won't shut down the internet service in Burma?
March 16, 2011 at 6:22 AM
မြန်မာပြည်က ပြည်သူတွေ(နိုင်ငံခြားကို တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဖို့ မပြောနဲ့၊ ပြည်တွင်းမှာတောင် ကြားလား၊ ကြောင်လားနဲ့ အလွန်ကောင်းတဲ့ ဆသရ ဖုန်းတွေ သုံးနေကြရတဲ့ သူတွေ) အင်တာနက် သုံးပြီး နိုင်ငံခြားကို ဖုန်းဆက်တဲ့ အတွက် နိုင်ငံတော်ရဲ့ ဝင်ငွေတွေ ထိခိုက်တယ် ဆိုတာ ဘဘကြီးတို့ သားသမီးတွေ အပျင်းပြေ ရှော့ပင် တစ်ခါထွက်စာလောက်၊ ဘဘကြီးတို့ ခရီးစဉ် တစ်ခေါက်လာရင် ဘဘကြီးတို့တင်မက ပါလာသမျှ ဆွေတော်၊ မျိုးတော် အပေါင်းတွေကိုပါ လက်အောက်မှာရှိတဲ့ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းတွေ၊ တပ်တွေက ပြုစုရ၊ စောင့်ရှောက်ရ (အဲလိုမှ မလုပ်ရင်ဘည်း ဘဘတွေက သောက်ပြဿနာကို တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရှာကြတယ်လေ) လိုသမျှ ဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့ ကုန်ကျစားရိတ်တွေလောက် မရှိပါဘူး လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒီလို ဖြုတ်ဦးနှောက်တွေနဲ့ ဆင်ကြံကြံချင်ကြတဲ့ ဘဘတွေက နျူကလီးယား ဗုံးပါ ထုတ်ဖို့ ကြံစည်ကြသေးတယ် ဆိုတော့ ရီလိုက်ရတာ ဖတ်ဖတ်မော၊ ရင်ဘတ်က နောက်ကျောလို့ပဲ အော်လိုက်ချင်တော့တယ်ခင်ဗျ။
(သတင်းတစ်ခုခု ထွက်လာတိုင်း လာလာဆဲနေကြတဲ့ မောင်ရင်များလည်း သေချာပြန်သုံးသပ်ကြပါ။ ဒီလိုမျိုး အဓိပ္ပါယ်မရှိ၊ ကိုယ်ထင်ရာ ကိုယ်လုပ်၊ ဒီလောက် အခြေခံကျတဲ့ ဘာမှ မဟုတ်တဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ အခွင့်အရေး သေးသေးလေးကိုတောင် ပုဒ်ထီး၊ ပုဒ်မတွေ အမျိုးမျိုး တပ်ပြီး တစ်ဆိတ်ရှိ အရေးယူမယ်၊ အဖတ်စားမယ် နဲ့ ကိုယ့်ပြည်သူကို ဓားမိုးပြီး အုပ်ချုပ်နေတဲ့ ဝန်ကြီး၊ ညွှန်မှုး အမည်ခံထားကြတဲ့ လူတွေဟာ မောင်ရင်တို့က သူတို့ ကို ခေါင်းဆောင်တင်ပြီး သူတို့ အစား နာပေးနေကြတာ၊ ဆဲပေးနေရတာရော တစ်ကယ်ရော ထိုက်တန်ရဲ့လားဆိုတာ ကိုယ်လက်ရှိ တွေ့ကြုံနေရတဲ့၊ ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေ ကြုံနေရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး သုံးသပ် ဆုံးဖြတ် ကြပါလို့ အကြံပေးပါတယ်။)
March 16, 2011 at 7:57 AM
စေါက်ပေါတွေထုတ်သမျှအမိန့် ဘာမှခေါင်းငုံ့ ခံစရာမလိုဘူး သုံးတယ်ကွာ ဘာဖြစ်လဲ
ွ အဲဒါတွေကို သုံးပြီးဆက်သွယ်တော့ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေတွေ တက်တာပေါ့။ နိုင်ငံခြားက လူတွေအနေနဲ့ ဖုန်းခ အများကြီးအကုန်အကျသက်သာတော့ တိုင်းပြည်ကို များများပြန်ပို့နိုင်တာပေါ့။ တိုင်းပြည်ဝင်ငွေတိုးပါတယ်။ ပြည်တွင်းကအဲဒီဝင်ငွေကိုမှီခိုနေသူတွေလည်း တခြားနေရာမှ ပိုသုံးနိုင်တာပေါ့။ အဲဒါကိုစဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်.
This is really absurd announcement and brainless decision. Our country has already been suffered from information blindness, and government should've aided in IT industries. How much would it promote the national budget by closing VoIP connection? 10 Mil USD per year? Internet cafe or others forms are small business, and one of their pitch for making money is VoIP. Closing down VoIP is same as killing these business. They should see much more bigger picture than this.
March 16, 2011 at 10:40 AM
မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် လုံးဝစိတ်မကောင်းပါဘူး။
G talk, skype, vzo,pfingo,.. တွေကိုသုံးခွင့်မရှိတော့ရင်.. မင်းတို့ကိုနှစ်စဉ် အခွန်ပေးပြီး ဖွင့်ထားတဲ့ internet cafe တွေပိတ်ကုန်မှာပေါ့ကွ... ဒါဆို မင်းတို့ပြောတဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေ ဆိုတဲ့မင်းတို့ရဲ့ မယားငယ်တွေအတွက်ဝင်ငွေတွေ လျော့နဲကုန်မှာပေါ့ ခွေးသားတွေရဲ့.... ( ရိုင်းတာရှိရင်ခွင့်လွှတ်ပါ နည်းပညာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်လွန်းအားကြီးလို့ပါ )
Please take care Daw Su. Their target is Daw Su. If they see the speech of Daw Su to other country in future, they will force arrest Daw Su by the act of IT or something.
wonnalay said... :
March 16, 2011 at 2:48 PM
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ေ ရးလုပ်ငန်းက သက်ဆိုင်ရာ လူကြီးများ ခင်ဗျား..
နိုင်ငံတော်အာဏာ ရဲ့အစစ်အမှန်ဟာ ပြည်သူပြည်သားများထံ က ဆင်းသက်တယ်လို့ခံယူထားပါတယ် လို့ အမှန်တကယ် ယုံကြည်ပါသည်ဆို လျှင်.
Gtalk,Pfingo, VZO..စသည် သုံးသင့် မသုံးသင့် ကို ပြည်သူအများ နှင့်
အင်တာနက် သုံးစွဲသူများထံ က ဆန္ဒခံယူ ပြီးမှ လူထု ဆန္ဒ နှင့်အညီ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ဖို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
လူထု ဆန္ဒ အမှန်ကို လစ်လျူရှုလျက်
နေရာတကာ အမိန့် အာဏာ ညွှန်ကြားချက် ဆိုတာချည်းနဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေမည်ဆိုပါက........
ယခင် နှင့် ယခု...... ကုလားကြီးနဲ့ အရာကြီး အတူတူ ဟု ပြောသကဲ့သို့ဖြစ်စေလျက်..
၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေ၊ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ.နှင့် လက်ရှိ ခေါ်ယူကျင်းပလျက် ရှိသော ပြည်သူ့လွှတ်တော် . အမျိုးသားလွှတ်တော် ဆိုသည်များကို ဂုဏ်သိက္ခာကျစေမည့် လုပ်ရပ်များဟုသာ ပြည်သူအများ ယူဆကြမှာဖြစ်ကြောင်း ပါခင်ဗျား။